Kusho ukuthini uma i-Outlook ithi ukuxhumeka okulinganiselwe? - Imicrosoft Outlook
Main > Imicrosoft Outlook > Ukuxhumeka kwe-Outlook limited - ungaxazulula kanjani
Ukuxhumeka kwe-Outlook limited - ungaxazulula kanjani
Kusho ukuthini uma i-Outlook ithi ukuxhumeka okulinganiselwe?
Le nkinga idalwe yinkinga yezimvume zohlangothi lweseva enqabe izicelo zokuxhuma kwiseva ye-Windows Live Calendar isebenzisa i-HTTPS kwamanye (hhayi onke) amaseva we-hotmail. Inkinga ibhekiwe kuseva futhi azikho izibuyekezo ezidingekayo kufayela le-UmbonoIsixhumi se-Hotmail.Julayi 11 2011
Sawubona mngane! Namuhla kule ndatshana ngizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani i-inthanethi kepha inkinga ehambisanayo.
i-scanreg windows 7
Kusho ukuthi unezinkinga zokufinyelela ku-inthanethi. Nakhu ukuthi ungayilungisa kanjani le nkinga. Abangane! Ngokuvamile uzobona ukuthi uxhumeke ku-WiFi noma ku-Lan.
Kepha awukwazi ukufinyelela kwi-inthanethi. Lapha uzobona uphawu lwephutha eliphuzi. Namuhla kule ndatshana ngizokukhombisa ukuthi ungalulungisa kanjani lolu hlobo lwephutha, kunezindlela ezimbili zokulungisa lolu hlobo lwephutha.
Cisha imodemu yakho bese uyivula futhi ngemuva kwemizuzu engu-2. bese uzama ukungena kwi-inthanethi. Uma inkinga ingaxazululwa, zama lezi zinyathelo ... 2.
Vele ulandele izinyathelo engizenzayo ku-athikili manje. Chofoza lapha ... 1.
Chofoza Ukuxilongwa ...
Uma ukuxilongwa kungalungisanga iphutha noma inkinga yakho, chofoza Izakhiwo ....
Manje landela Vele ubuke i-athikili. ngokuqinisekile izoxazulula inkinga yakho ....
Kungani umbono wami ungaxhumi?
Imbangela:Umbonokuyintoayixhunyiwekuseva esebenzayoIMicrosoftI-Exchange Server. Isixazululo: Bheka eyakhoIMicrosoftShintsha ukuxhumeka kweseva. Bheka i-akhawunti yokushintshana kufasitelana elingakwesobunxele. Uma kukhona ifayela le-inkingangokuxhumeka, isithonjana senkomba sizoba orange.
Kungani umbono uthi unokuxhumana okukhawulelwe?
Njengoba isimo sephutha singenxa yedatha engavumelanisiwe, ukusebenza okuzungezile kuphumela ekulahlekelweni kwedatha yomsebenzisi ebingavumelanisiwe. Isexwayiso esithi 'Ukuxhumeka Okukhawulelwe' sibonakala sihambisana namaphutha aphuma ngaphandle kwememori ku-Log yokuvumelanisa lapho isistimu ingene kulesi simo sokuhluleka. Ngabe uxhuma i-Outlook ku: Exchange, ISP, njll?
Ngikungena kanjani ukuxhumeka kwami ​​ekubukeni?
Kuzofanele uvule ukungena ngemvume ukuze usebenzise isici. Ukuvula ukungena ngemvume ku-Outlook 2007: Ukuvula ukungena ngemvume ku-Outlook 2010 naku-2013: Chofoza ku-Izinketho, bese ukhetha Okuthuthukile. Lapho i-Outlook isebenza futhi, zama ukuphindaphinda inkinga yakho yokuxhuma ukuze i-Outlook ikwazi ukuyifaka. Lapho usukwenzile lokhu, vula ifayela lokungena i-OPMLog.log.
Kusho ukuthini 'ukuxhumana okukhawulelwe ' ku-Windows Live?
Umbhalo othi 'Ukuxhumana Okulinganiselwe' uvela kubha yomumo endaweni yombhalo othi 'Kuxhunywe ku-Windows Live Hotmail'. Ngokucatshangwa ukuthi 'Ukuxhumana Okukhawulelwe' kubhekise kuxhumano lwe-Hotmail. Ngine-akhawunti ye-IMAP nokuxhumeka kuvulekile, ngakho-ke kungahle kubhekisele kulolo xhumano.
Yini okufanele ngiyenze ngolwazi olulinganiselwe lwenethiwekhi?
Uma unemibuzo eyisisekelo yokusetshenziswa ne-Microsoft Outlook ungavakashela nezithangami ezikuMicrosoft Answers: http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/outlook 3 3 Ibha yezinga engezansi kwe-Outlook I-interface yomsebenzisi ka-2010 ifaka phakathi isithonjana sesexwayiso nombhalo othi 'Ukuxhumana Okukhawulelwe.' Yini okufanele ngiyenze ngalolu lwazi?